७ दिने ‘लकडाउन’लाई ७ फिल्म-२- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १२, २०७६ यज्ञश
काठमाडौँ — लकडाउनको दोस्रो दिन । नेपालमा आज कोरोना संक्रमितको संख्या तीन पुग्यो । उपचार भएकाको संख्या एक । कोरोना पुग्न बाँकी रहेको देश मध्ये मालीमा पनि आजै दुईजनामा देखियो ।
कोभिड– १९ को यो विश्व यात्राले एक फन्‍को पूरै मारेको छ ।
सात दिने लकडाउनका लागि दिनको एउटाको दरले ७ एसियाली देशका ७ फिल्मका सिफारिसको दोस्रो श्रृखंलामा आज म जापानको फिल्मको सिफारिस गर्दैछु ।
हिजो सिफारिस गरेको चिनियाँ फिल्म ‘फ्लावर्स अफ वार’ का निर्देशक च्याङ यिमाउ यो पुस्ताकै एक महान् निर्देशक हुन् । उनलाई गत वर्षको बर्लिन फिल्म फेस्टिभलमा भेट्‍ने मौका मेरो हातबाट फुस्किएको थियो । उनको फिल्म ६९ औं बर्लिन फेस्टिभलको एक प्रमुख फिल्म थियो । तर, प्रिमियरका लागि मिती तोकिएको चार दिनअघि चिनियाँ सेन्सरले यो फिल्म पास गरेन । र, उनी बर्लिन आएनन् । त्यो फिल्म अहिलेसम्म पनि रिलिज भएको छैन ।
आज सिफारिस गर्न लागेको जापानी फिल्मका निर्देशक भने यसपालीको बर्लिन फेस्टिभलमा आए । उनको अन्तर्वार्ता गर्न नपाए पनि भेट्‍न र झन्डै डेढ घन्टा लामो संवाद सुन्न मैले पाएँ । त्यो संवाद पनि कोसँग ? ताइवानका हलिउड निर्देशक आङ लीसँग । जसले ‘ब्रोकब्याक माउन्टेन’ र ‘लाइफ अफ पाइ’जस्ता फिल्म बनाएका छन् ।
यी जापानी हुन्, हिरोकाजु कोरेइदा ।
नासाले बेलाबेला नयाँ तारा भेट्टाएजस्तो हामी बेलाबेला कुनै यस्ता निर्देशक भेट्टाउँछौं, जसको फिल्मोग्राफी नवग्रहको मालाजस्तै हुन्छ । कोरेइदा पनि त्यस्तै निर्देशक हुन् । सन् २००८ मा जापानी फिल्म ‘डिपाचर्स’ले विदेशी भाषाको ओस्कर जितेपछि जापानी फिल्म फेरि 'फर्म'मा आए । कुनैबेला जापानका अकिरो कुरोसावालाई फिल्म बनाउन पैसाको समस्या भयो भन्दा मार्टिन स्कोरसेजी र स्टिवन स्पिलवर्गले निर्माता बनिदिन्थे । जापानको शान त्यस्तो थियो ।
हिरोकाजु 'डिपार्चर्स' भन्दा धेरै अघिका निर्देशक हुन् । उनले पहिलो फिल्म ३० वर्षअघि बनाएका थिए । १९९५ को ‘माबोरोसी’पछि उनलाई धेरैले चिन्न थालिसकेका थिए । त्यसपछिको फिल्म ‘आफ्टर लाइफ’ले चाहिँ उनलाई स्टार बनाइदिएको थियो ।
यसपाली बर्लिनमा आङ लीको रोजाइमा हिरोकाजुको ‘आफ्टर लाइफ’ देखाइएको थियो । एक साताभित्रमा निधन भएका केही मानिसहरु चित्रगुप्तको अफिसजस्तो कुनै कार्यालयमा पुगेका छन्, जहाँ उनीहरुलाई आफ्नो जीवनको सबभन्दा सुन्दर क्षण छान्न लगाइन्छ । र, उनीहरुलाई भनिन्छ– आइन्दा तपाईंका सबै स्मृतिहरु मेटिने छन्, यही एउटामात्रै रहनेछ ।
तपाईंले त्यसरी छान्नु पर्‍यो भने आफ्नो जीवनको कुन क्षण छान्नुहुन्छ ?
लाइक फादर लाइक सन (२०१३, जापान)
यो फिल्म पहिलोपटक मैले यात्रामा हेरेको थिएँ । हेडफोनको साउन्ड धेरै राम्रो थिएन । सबटाइटल पढ्नलाई स्क्रिन धेरै ठूलो थिएन । तैपनि, फिल्म छोड्‍न मन लागेन । दोस्रोपटक घरमा आरामले हेरेपछि बल्ल धीत मरेको थियो ।
यो कथा हो, बाबुछोराको । बाबुछोरामाथि संसारमा धेरै फिल्म बनेका छन् । गीत, कविता र उपन्यास लेखिएका छन् । भूगोल र भाषा फरक भए पनि मूलत: संसारभरका मानिसको भावना उस्तै हुन्छ । त्यसैले गर्दा एउटा भाषा र भूगोलको कथाले अर्को भाषा र भूगोलको मानिसलाई छुन्छ । आखिर यो सबै भूगोलमा पुगेका मानिसहरु एउटै मूलबाट उत्पत्ति भएका पानीका भंगालाजस्ता हुन् । सबटाइटलले पात्रले बोलेको संवाद बुझाउँछ, भावना त तपाईंको आफ्नै हो । फिल्मको चरित्र वा परिस्थितिसँग त्यसले मेल खायो भने तपाईंलाई त्यसले छुन्छ ।
यस वर्ष ओस्कर जितेको कोरियन फिल्म ‘प्यारासाइट’ जस्तै कोरेइदाको ‘लाइक फादर लाइक सन’ पनि दुई परिवारको कथा हो । धनी र गरिब । एउटा सहरको आलीसान जीवनमा छ, अर्को सानो बजारको गरिबीमा । ‘प्यारासाइट’मा जस्तै यसमा पनि सन्तानप्रतिको प्रेमले यी दुई परिवारलाई जोड्छ ।
एकछिनलाई सोच्नुस्– तपाईंको जीवन आफूले चाहेजस्तै सुन्दर तरिकाले चलिरहेको छ । तपाईंसँग धन र प्रेम दुवै छ । जीवनमा शान्ति छ । तपाईंले आफ्नो बच्चालाई चाहेजस्तो स्कुलमा पढाइरहनु भएको छ । र, उ तपाईंले भनेजस्तो गरी हुर्किइरहेको छ ।
यस्तैमा एकदिन अस्पतालबाट तपाईंलाई फोन आउँछ, केही जरुरी कुरा छ । तपाईं जानुहुन्छ र थाहा पाउनुहुन्छ– तपाईंको बच्चा त साटिएको रहेछ । तपाईले जसमाथि यति ठूलो लगानी गर्नुभएको छ, जसमाथि तपाईंलाई गर्व छ, त्यो सन्तान अरु नै कसैको रहेछ ? तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
तपाईंको आफ्नो छोरो वा छोरी चाहिँ कहाँ होला ? तपाईंले यो बच्चालाई दिएकोजस्तो सुविधा के तपाईंको आफ्नो सन्तानले पाएको होला ? अब तपाईं आफूले हुर्काइरहेको बच्चासँग नै खुसीसाथ बस्नुहुन्छ कि आफ्नो सन्तान खोज्न जानुहुन्छ ?
अझै अर्को प्रश्न– यदि तपाईंको आफ्नो सन्तान साह्रै गएगुज्रेको हालतमा बाँचिरहेको रहेछ भने तपाईं के गर्नु होला ?
‘लाइक फादर लाइक सन’ यसकै कथा हो । एउटा परिवारको कथा । मूल्य र मान्यताको कथा । धन र प्रेमको कथा ।
के बच्चाका लागि तपाईंले कमाइदिने धन वा पढाइदिने स्कुल नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो ? कि अरु पनि केही कुरा छ
अभिभावकहरुको मनमै तीर हान्ने गरी हिरोकाजु प्रश्न उठाउँछन् । यो यस्तो फिल्मले हो जसले तपाईंलाई घरी उद्वेलित बनाउँछ, घरी द्रबित ।
सबभन्दा ठूलो प्रश्न त फिल्ममा पछि आउँछ । यो कथामा अभिभावक मात्र छैनन्, बच्चा पनि छन् । उनीहरुलाई यो सत्य कस्तो लाग्ला ? के तिनले यो सब सहन गर्न सक्लान् ? ९ वा १० वर्षको कुनै बच्चा, जसले एउटा दम्पतीलाई आफ्‍नो संसारै ठानेर बसेको छ, एक सेकेन्डमा उनीहरुको कोही पनि होइनन् भन्ने थाहा पायो भने के गर्ला ?
यी सब भावनाका कथाका लागि ‘लाइक फादर लाइक सन’ हेर्नुस् । र, हेर्नुस्– हिरोकाजु कति उम्दा तरिकाले कथा भन्छन् ।
हिरोकाजु कोरेइदाले गत वर्ष बनाएको फिल्म ‘सपलिफ्टर्स’को मैले केहीअघि समीक्षा लेखेको थिएँ । यो फिल्मले गत वर्ष विश्व प्रसिद्ध कान फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जितेको थियो । र, त्यस वर्ष ओस्करमा अर्न्तराष्ट्रिय फिल्मको प्रतिस्पर्धामा थियो । यो पनि अर्को उम्दा फिल्म हो ।
यसको सफलतापछि ५७ वर्षीय हिरोकाजु फ्रान्सतिर लागे । जुलियट बिनोसेलाई लिएर उनले बनाएको फ्रेन्‍च फिल्म ‘द ट्रुथ’ पनि आइसकेको छ ।
वैकल्पिक फिल्म– 'लाइक समवन इन लभ' (२०१२)
जसरी हिरोकाजुले फ्रान्स गएर जुलियट बिनोसेसँग फिल्म बनाए, इरानका महान् निर्देशक अब्बास किरुस्तामीले यो काम केही वर्ष पहिले नै गरिसकेका थिए । उनले पनि फ्रान्स पुगेर ‘सर्टीफाइड कपी’ बनाएका थिए, जसको मुख्य भूमिकामा थिइन्, जुलियट बिनोसे ।
तर, यो वैकल्पिक फिल्म ‘लाइक समवन इन लभ’ भने उनले जापान पुगेर बनाएका थिए । यो जापानको कथा हो, जापानी समाज र भावनाको कथा । यसैले यसलाई जापानी फिल्मकै रुपमा यहाँ उल्लेख गरेको हुँ ।
एक वृद्ध प्रोफेसर, एक सुन्दरी युवती, उसको प्रेमी र अनन्त : प्रतीक्षा । सबैलाई कुनै न कुनै कुराको प्रतीक्षा । के प्रतीक्षाको कुनै अन्त्य छ । तृसनाको कुनै अन्त्य छ ? प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १८:४७